यि हुन् मष्तिस्क चम्काउने ५ खान्की ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यि हुन् मष्तिस्क चम्काउने ५ खान्की !
मेरो लाइफस्टाइल || 15 February, 2021
शारीरिक रुपमा हामी स्वस्थ हुन धेरै किसिमका शारीरिक कसरत गर्छौ भने शरीरलाई हुने किसिमले धेरै किसिमका खानेकुराहरु खाने पनि गर्छौ । शरीर जति नै मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ । शारीरिक रुपमा जस्तै मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ भयौं भने हामीलाई धेरै किसिमका तनावहरुले सताउदैन ।
मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउने केही खानेकुराहरुलाई तपाईले आफ्नो खानपिनमा नियमित समावेश गर्नु भयो भने तपाई धेरै किसिमका तनाववाट मुक्त समेत हुनुहुनेछ ।
दहीले हाम्रो पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । दहीको सेवनले हाम्रो मानसिक स्वास्थलाई पनि प्रभावित पार्छ । नियमित खानपिनमा दहीलाई समावेस गर्दा तनाव र चिन्ता बिस्तारै कम हँुदै जान्छ । यदी तपाईलाई स–सानो कुरामा पनि रिस उठ्ने, झर्किने र मुड अफ हुन्छ भने दहीलाई नियमित जसो सेवन गर्दा यस्ता किसिमका समस्याहरु हट्दै जान्छ ।
अण्डामा पाईने केही पोषक तत्वहरुले मानसिक स्वास्थलाई राम्रो गर्न धेरै नै मद्दत गर्छ । अण्डामा पाइने फोलिक एसिड, बायोटीन, कोलाइन आदिले मस्तिष्कका कोशिकाहरुको विकास गर्न मद्दत समेत गर्छ ।
हरियो तरकारीहरु शरीरिक स्वास्थको लागि मात्र नभएर मानसिक स्वास्थका लागि पनि धेरै नै उपयोगि मानिन्छ । आफुले खाने खानपिनमा नियमित जसो सागसब्जिलाई समावेश गरेर खानुहुन्छ भने संस्मरण क्षमता कम हुने डिमेन्सिया जस्तो मानसिक समस्या पनि कम हुदैं जान्छ । हरियो सागसब्जिको नियमित सेवले मस्तिष्कका कोशिकाहरुलाई सक्रिय बनाईराख्छ ।
सुकेको फलफूल अर्थात् ड्राई फ्रूट्स वा नट्स जस्ता किसिमका खानेकुराहरुमा म्याग्नेसियम, सेलेनियम र तामा प्रचुर मात्रामा पाईन्छ । यस्ता किसिमका खानेकुराहरुको नियमित सेवनले मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउन धेरै मद्दत गर्छ ।
डार्क चकलेटमा पाइने कोकोले मस्तिष्कको रक्तसंचार बढाउन मद्दत गर्छ । मस्तिष्कमा रक्तसंचारको प्रवाह बढेपछि मस्तिष्क सक्रिय समेत हुन्छ । यसका पाइने फ्लेवेनाइडले मस्तिष्कलाई जवान राख्नुका साथसाथै मस्तिष्कका कोशिकाहरुको क्षतिलाई कम गर्छ ।
पानीमा दिसाजन्य पदार्थ मिश्रण
स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले विभिन्न समयमा १२० वटाको नमुना परीक्षणमा ९१ वटामा इकोली भेटिएको पाइएको हो । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये
हरेक वर्षायाममा नेपालका विभिन्न भागमा हैजाका बिरामीहरू भेटिने गरेका छन् । यसवर्ष काठमाडौँमै संक्रमितहरू भेटिएका छन् । उपत्यकाका १० ठाउँमा
गर्भवती महिलामा गर्मीको समयमा गर्भपातको सम्भावना बढी हुने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । ८ वर्ष लामो अध्ययनमा परियोजनका अनुसन्धानकर्ताहरूले
५० वर्षअघिको आदेश उल्ट्याइयो
अन्ततः अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चले देशव्यापी रूपमा गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको एउटा